Fampidirana Material Machining CNC | Ny Blog | PTJ Hardware, Inc.
Home > Blog > Fampidirana fitaovana
Ny firafitry ny fiaramanidina Aluminum Alloy 7A09
Anisan'ireo fitaovana aluminium ho an'ny fiara aerospace any Shina, 7A09 firaka dia iray amin'ireo alloys matanjaka avo indrindra ho an'ny ampahany ara-drafitra lehibe. Ny vokatra semi-vita misy dia misy takelaka, strips, bars, profiles, fantsona matevina, forgings, sns. Ny singa simika dia mitombina kokoa noho ny firaka 7A04, noho izany dia manana fampisehoana feno tsara izy ary lasa iray amin'ireo fitaovana fototra an'ny mpamorona. . Ny singa simika (mass%): 0.5Si, 0.5Fe, (1.2—2.0) Cu, 0.15 Mn, (2.0-3.0) Mg, (0.16-0.30) Cr, (5.1-6.1) Zn, 0.10Ti, loto hafa dia 0.05 tsirairay, mitotaly 0.10, ary ny ambiny dia Al.
7A04 Alloy - Tanjaky ny vokatra manakaiky ny tanjaky ny tensile
7A04 firaka dia Al-Zn-Mg-Cu andian-dahatsoratra hafanana aerospace aerospace mahery vaika aluminium firaka, izay azo tsaboina hafanana sy hamafisina. Ny firafiny dia voatanisa ao amin'ny GB/T3190-2008, ary mifanaraka amin'ny firaka B95 an'ny Firaisana Sovietika sy Rosia ary ny AlZnMgCu1 any Alemaina. Ny firaka .5.3.4365 dia mitovy, satria tamin'ny taona 1944 ny orinasa faha-95 an'ny Firaisana Sovietika dia nahomby tamin'ny andrana namokatra an'io vokatra semi-vita io, noho izany ny anarana hoe alloy B95. Tamin'ny 1957, China Northeast Light Alloy Co., Ltd. (Harbin Aluminum Processing Plant) dia namokatra io firaka io noho ny fanampian'ny manam-pahaizana sovietika. Plate Alloy sy fitaovana extruded.
Ny antony manosika tsikelikely ireo vy metaly soloina amin'ny plastika thermoplastic
Ny metaly takelaka dia teknolojia fanodinana vy izay manatanteraka andiam-panodinana toy ny fanety, fanapahana, fikapohana, ary famoronan-taratasy firakotra. Ny ankamaroan'ny fitaovana voahodina dia takelaka vy, ary ny vokatra voadio dia be mpampiasa, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiara.
Ny teknolojia fitsaboana amin'ny alimina
Ny Aluminium dia manana tombony maro toa ny ambany hakitroka, tanjaka manokana manokana, fanoherana ny harafesina tsara, fitantanana herinaratra sy hafanana avo lenta, fanamafisam-peo, plastika tsara, fanodinana sy famolavolana mora ary fananana haingon-trano ambonimbony. Ny firaka aliminioma dia vita amin'ny aliminioma tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny fampidirana singa mampirongatra sasany
Ny fenitra mahazatra an'ny milina CNC ampiasaina amin'ny famolavolana bobongolo
Ny fanaparitahana ny famonoana ho faty dia fitaovana ilaina amin'ny famoahana ny famokarana, ary vokatra azo avy amin'ny haitao izy io. Ny fahasarotan'ny firafitry ny milina dia tsy azo ihodivirana fa hitarika ho amin'ny fahasarotana amin'ny endrik'ireo faritra bobongolo. Ity manaraka ity dia manazava ny fahalalana momba ny fenitra CNC mahazatra ampiasaina amin'ny famolavolana milina bobongolo.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vy haingam-pandeha sy ny vy vy
Ny vy haingam-pandeha (HSS) dia vy vy misy hamafin'ny hafanana, fanoherana avo lenta ary fanoherana hafanana avo, fantatra koa amin'ny vy vy na vy eo aloha, izay midika fa azo hamafisina na dia ampangatsiahina amin'ny rivotra aza mandritra ny famonoana azy, ary maranitra be io. Antsoina koa hoe vy fotsy izy io.
Ny fahalalana fototra amin'ny bobongolo vita amin'ny plastera sy ny maodelin'ny keramika
Amin'ny ankapobeny ny gypsum dia kristaly vovoka fotsy, ary koa kristaly mavo volondavenona sy mena. Izany dia an'ny rafitra kristaly monolithic. Raha ny fifangaroana dia mizara ho dyypsum dihydrate sy gypsum anhydrous izy io. Ny fampiharana famokarana bobongolo indostrialy dia matetika gypsum dihydrate.
Inona ny GR2 Titanium
Ny titanium GR2 dia vy fotsy vita amin'ny volafotsy manana hakitroka 4.5g / cm3 (20 ℃) ​​ary teboka lelan-1668 ℃. Ny akora vita amin'ny titanium sy titanium dia manana ny toetran'ny fanoherana ny harafesina tsara, ny hakitroky ambany ary ny tanjaka manokana manokana.
Inona no atao hoe Hastelloy C-276
Hastelloy C-276 dia alika nickel-molybdenum-chromium-tungsten miaraka amina fanoherana harafesina tsara sy fananana fanamboarana tsara.
Titanium firaka famolavolana fitaovana
Ny fametahana ny metaly titanium TC4 dia tena sarotra. Ny dingana feno amin'ny firaka titanium sy titanium dia tena tsy mitovy amin'ny vy, firaka aliminioma ary metaly mavesatra maro amin'ny resaka firafitra kristaly, toetra ara-batana ary fananana simika. Ny firaka dia vy izay tsy mora zahana.
Inona ny Inconel 690
Inconel 690 (UNS N06690) alika avy amin'ny nikela dia manana atiny chromium 27.0-31.0% sy firaka mifototra amin'ny nikela miaraka amin'ny atiny nikela manodidina ny 59%
Inona no atao hoe Inconel 718
Inconel 718 dia alika miorina amin'ny nikela izay azo hamafisina amin'ny rotsakorana. Mbola mampiseho ny tanjaky ny vokatra ambony, ny tanjaka am-pahefana ary ny tanjaka mamakivaky amin'ny hafanana ambony hatramin'ny 704 ° C.